Waxaan shaqaaleysiinaynaa Qabanqaabiyaha Bulshada! - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-free
Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta waxay shaqaaleysiinayaan Qabanqaabiyaha Cadaaladda Cunnada Beesha!
Saacadaha: Wakhti buuxa, ka dhaaf
Qiyaasta magdhowga: $56,000-63,000
Dib u eegista mudnaanta leh waxay bilaabataa Janaayo 5, 2022
Adiga kugu saabsan:
Waxaad leedahay go'aan qoto dheer oo lagu baabi'inayo gaajada Oregon iyo rabitaanka caddaaladda bulshada, jinsiyadda, iyo dhaqaalaha. Waxaad aaminsantahay in abaabulka bulshooyinka ay gaajadu sida aadka ah u saamaysay ay tahay habka ugu wanaagsan ee si siman loogu kordhin karo xubnaha bulshada ee helitaanka cuntada. Waxaad ku kalsoon tahay in bulshooyinku ogaadaan waxa ay u baahan yihiin si ay u koraan.
Waxaad keentey waayo-aragnimo iyo khibrad si aad uga caawiso aragtida, naqshadaynta iyo hirgelinta abaabulka, abaabulka, iyo barnaamijyada horumarinta bulshada ee Hunger-Free Oregon. Waxaad tahay fududeeye xirfad leh: Waxaad qabsan kartaa qol, akhrin kartaa qol, sidoo kale waxaad samayn kartaa habraac. Waxaad si xirfad leh uga guurtay abaabulka shakhsi ahaan una guurtay abaabulka internetka. Waxaad jeceshahay inaad u shaqeyso si wada jir ah iyo iskaashi, dhisidda is afgarad iyo dhisidda awoodda.
Ku saabsan Goobta:
Mawqifka Abaabulaha Cadaalada Cunnada Beesha waxa ay dhistaa awooda aasaasiga ah si ay si siman u kordhiso helista cuntada ee Oregon. Booskani waxa uu la shaqayn doonaa Isku-duwaha Cadaalada Cunnada Bulshada si ay u wadaagaan culayska shaqada, dhamaystiraan aagagga khibradda iyo khibradda midba midka kale, oo diiradda saaraya faylalka iyo mudnaanta shakhsi ahaaneed.
Ujeeddada booskan ayaa noqon doonta si wada jir ah loo naqshadeeyo oo loo hirgeliyo abaabulka, abaabulka, iyo barnaamijyada horumarinta bulshada Oregon-ka-gaajo-la'aanta. Booska shaqadeeda waxaa ka mid ah: dhisidda awoodda iyo u abaabulida dadka ololaha arrimaha helitaanka cuntada soogalootiga; kordhinta badbaadada cuntada ee ilmaha iyo qoyska iyada oo loo marayo abaabulka iyo u doodista barnaamijyada nafaqeynta carruurta ee dawladda dhexe; iyo taageeridda xubnaha bulshada horumarinta xirfadahooda iyo hoggaamintooda iyada oo loo marayo Guddiga La-talinta Macmiilka ee SNAP.
Guji xiriirka hoose si aad u hesho tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan sharaxaadda shaqada, iyo tilmaamo ku saabsan sida loo codsado.
Qabanqaabiyaha Bulshada Oregon ee Hunger Free 2021 Sharaxaada Shaqada